I-25 YEQELA ELILUNGILEYO LEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SESITAYILE SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Inxalenye yeenwele eziyi-25 ezisecaleni
Eyona Iinwele Zamadoda Inxalenye yeenwele eziyi-25 ezisecaleni
Icandelo elisecaleni lelinye lezona zinwele ziphambili nezithandwayo kumadoda. Inxalenye esecaleni yokucheba iinwele imile kuvavanyo lwexesha, iyenza ukuba ibe lixesha kwaye ibe nobunkunkqele…
Icandelo elisecaleni lelinye lezona zinwele ziphambili nezithandwayo kumadoda. Inxalenye esecaleni yokucheba iinwele imile kuvavanyo lwexesha, iyenza isitayile esinexesha elingenasiphelo kunye nesichubekileyo onokuyinxiba naphina. Nokuba ungumsebenzi osebenza eofisini okanye ungumntu nje wale mihla ofuna ukubonakala okupholileyo ngaphandle komzamo, ukusika kwale ndoda kumgangatho oqhelekileyo kunye nokujongeka. Abanye abantu babhangqa icala kwicala lokuphela emacaleni nasemva, ngelixa abanye bekhetha ukufumana i-taper okanye i-undercut yokusika ngokwesiko okungaphezulu. Unokukhetha kwakhona ukuba ucoceke ukujonga ngokutsha okanye udibanise iinwele zakho ezahluliweyo kunye nentshebe yokugqibezela ubudoda. Ngeenwele ezininzi ezimfutshane nezinde ezisecaleni zokukhetha, kunokuba ngumceli mngeni ekuthatheni isigqibo malunga nenwele ekwahlulwe ngayo ekunene. Ukukukhuthaza ngokusika kunye nezitayile, siye saqulunqa uluhlu lweyona ndawo ilungileyo yokucheba iinwele zamadoda ukuze ufumane ngoku. Ukusuka kukwahluka kweklasikhi kwimbonakalo ephelelwe lixesha, jonga iinxalenye zecala leenwele ukuze ufumane ukujonga okukugqibeleleyo!
Izitayela zeenwele zenkwenkwe encinci
1Yintoni icala lokucheba iinwele?
MbiniUyifumana njani iCandelo lokucheba iinwele
3Uyenza njani indlela yokuCoca icala leenwele
4Elona cala lilungileyo kwicala leenwele zeenwele
4.2Ukuphela okuphantsi kunye neNxalenye eNzima
4.3Ukuphela kweTaper ePhakamileyo ngeCandelo elisecaleni kunye neBrashi phezulu
4.4Icandelo eliLuqhekekileyo kunye neFade
4.5Ulusu oluphezulu luphela kunye neHard Side Part kunye neMilo ePhakamileyo
4.6Ukuphela okuphezulu kunye neCandelo eliQinisekileyo leCandelo
4.7I-Classic Gentlemen's Sika
4.8Icandelo leXesha eliKhuni elinamaXesha aMfutshane
4.9UkuPhakathi okuphakathi kunye neCandelo eliNzima
Yintoni icala lokucheba iinwele?
Icandelo leenwele ezisecaleni kwamadoda zilula kwaye aziphelelwa lixesha, kodwa zibandakanya ngaphezulu kweenwele ezihlukaniswe ecaleni. Icandelo elisecaleni ngokwesiko licocekile kwaye lifutshane iinwele zamadoda eziphantse zafana neenwele zomkhosi. Nangona kunjalo, ezinye izinto zala maxesha zongeza ivolumu ngaphambili kwaye zivumela ubude bezinwele ngaphezulu.
Ezi nkangeleko zintsha zibandakanya ukubonakala kwendalo ecaleni, kodwa zinika umdla ngakumbi kodwa kulula ukunxiba iinwele ezifanelekileyo kuluhlu olubanzi lweemilo zobuso. Nangona kunjalo, zonke iiyantlukwano zinamacandelo asisiseko afanayo okwahlulahlula icala, iinwele ezimfutshane (ii-intshi ezintathu okanye ngaphantsi), kunye neenwele ezikamiweyo kwicala nasemva.
Nangona icandelo elisecaleni lisebenza ngokusemgangathweni ngamadoda aneenwele ezingqindilili, kusenokwenzeka ukuba ufumane kwaye ubeke isitayile senxalenye esecaleni ngeenwele ezintle okanye ezincinci.
Uyifumana njani iCandelo lokucheba iinwele
Njengokuba kuninzi ukunqunyulwa kweenwele zamadoda, ukufumana ifoto yesitayile oyifunayo kwaye uyihambise kumchebi wakho kuya kukunceda uqiniseke ukuba usikwa kakuhle. Lo mthetho ubaluleke ngokukodwa ngenwele njengoko yahlukile njengenxalenye esecaleni ukusika kuhamba ngamagama amaninzi ahlukeneyo, kubandakanya nosomashishini osikwe iinwele okanye ukusikwa kwesintu ngenxalenye.
izitayela zeenwele ezinde zamadoda
Ukuba ufuna ukuchaza icala lokucheba iinwele, nazi ezinye zeenkcukacha onokuzitsho. Umzekelo, khetha ukuba leliphi icala lobuso ofuna iinwele zakho zahlukane kulo. Ngelixa zonke iinwele zomfana zinenxalenye yendalo, abanye benu banokufuna ukuzitshintsha; ukuba kunjalo, nxibelelana nelo stylist sakho.
Kwakhona, ukuba unethemba lokuba nenxalenye yevolumu engaphezulu, qiniseka ukuba iinwele zakho ubuncinci zii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-4 ubude kwaye umchebi wakho ushiya iinwele zinde ngaphezulu. Umahluko ekunokwenzeka ukuba ucele ubandakanya icandelo elinzima, apho umgca uchetyiwe ukugxininisa ukwahlulwa kweenwele. Inxalenye enzima yokucheba iinwele indalo yanamhlanje kwaye inokusetyenziselwa ukwenza isitayile esithandwayo.
Okokugqibela, uya kufuna ukuthatha isigqibo malunga nendlela emfutshane yokusika amacala. I-taper okanye i-fade, i-barber yakho iya kusebenzisa i-clippers kunye ne-setting ye-0, 1, 2, 3 okanye 4; Ngaphandle koko, ngenxalenye yecala leklasikhi, zama ubungakanani bokugada obuyi-5 okanye 6.
Uyenza njani indlela yokuCoca icala leenwele
Ngenxa yokuba eli cala lilunwele oluncinci, isitayile sibaluleke ngokukodwa kwaye sifuna umgangatho ophakamileyo we-pomade, i-wax, okanye i-putty. Ukongeza ivolumu lukhetho olufanelekileyo kwiklasikhi, iinwele ezisesikweni, ngelixa ukuthambisa iinwele kuya kwenza ukuba usomashishini abonakale elungile emsebenzini.
Into emnandi malunga nokucheba kweenwele zamadoda kukuba kukho iindlela ezoneleyo zokuloba kuwo nawuphina umcimbi. Nokuba ufuna i-hairstyle yezobuchwephesha eofisini okanye i-hairstyle epholileyo yomhla, icala elisecaleni libonelela ngeyona nto ibalaseleyo kwihlabathi liphela.
Ukwenza isitayile secandelo kwicala lokucheba kwendalo ngenkangeleko yendalo, ecokisekileyo, landela le miyalelo ingezantsi:
Geza kunye netawuli yome iinwele zakho de kube lula ukufuma.
Thatha isixa sokuphelisa ipomade okanye imveliso oyithandayo yeenwele kwaye uyihlikihle phakathi kwezandla zakho ukuze ushushu. Faka isicelo ngeenwele zakho ngokulinganayo kumacala omabini endawo.
Dibanisa iinwele ezahluliweyo kwicala nasemva, uqondise yonke imitya ukuya kwinqanaba elinye.
Ukuba ufuna ivolumu ngaphambili, efanayo nebrashi phezulu, kama iinwele zakho ngaxeshanye ngasemva nangasecaleni. Ngokuxubha kwicala le-angular, unokwenza ukuphakama okungaphezulu kunye nokuthungwa.
Okokugqibela, dibanisa icala elichaseneyo neenwele zakho phantsi okanye ngasemva, kuxhomekeke kukhetho lwakho.
Njengazo naziphi na iinwele zamadoda, zive ukhululekile ukuzama ukufumana esona sitayile silungileyo kuwe.
iitattoos zesikhova zamadoda
Elona cala lilungileyo kwicala leenwele zeenwele
Icandelo elisecaleni liza kuqhubeka liyinwele yamadoda eklasikhi, kwaye ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokubonakala, kukucheba iinwele okupholileyo kuye nawuphi na umfana. Jonga ingqokelela yethu yeenxalenye zecala lokucheba iinwele ngezantsi ukuze ufumane ezona zisikiweyo!
Ukuphela okuphantsi kunye neNxalenye eNzima
Ukuphela kweTaper ePhakamileyo ngeCandelo elisecaleni kunye neBrashi phezulu
Icandelo eliLuqhekekileyo kunye neFade
Ulusu oluphezulu luphela kunye neHard Side Part kunye neMilo ePhakamileyo
amadoda aneenwele ezinde
Ukuphela okuphezulu kunye neCandelo eliQinisekileyo leCandelo
I-Classic Gentlemen's Sika
Icandelo leXesha eliKhuni elinamaXesha aMfutshane
UkuPhakathi okuphakathi kunye neCandelo eliNzima
yintoni uphawu lwam lokunyuka
star chart chart calculator
iiplanethi ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
Umlawuli weplanethi ye-scorpio
itshathi yokuzalwa iintsingiselo iplanethi
Ungazifumana njani ii-Big 6 zakho kwi-Astrology (+Isibali seTshati yokuZalwa yasimahla)
I-101 Iitattoo zoSapho eziBalaseleyo kuMadoda